Izindaba - Amaslayidi Efu Labesifazane Aminyene Awugqinsi Womcamelo
I-Arch Support Slippers
Amaslayidi Efu Labesifazane Aminyene Aminyene Omcamelo
Isithende silinganisa cishe amayintshi angu-0.6”
【Ikhwalithi Ephezulu】: Amaslayidi Efu enziwe ngezinto ze-EVA ezilungele isikhumba futhi ezihlala isikhathi eside, ezilula kakhulu futhi eziphefumulayo.Ukusekela kwezinto ze-EVA kulungele ukukhulula ubuhlungu bezinyawo nezinye izimo ezingase zithinte unyawo.
【Isilayidi Sefu Esisha】: Amaslippers eshawa akhanyayo, i-super elastic sole, akwenza uzizwe sengathi ugibela ifu, anikeze abantu umuzwa wefu, izinto ezilula zikhululeke kakhudlwana, azisheleli, futhi zithambile kuneziliphu zenjoloba.
【Ama-Sandle Sole Aminyene】: Inkundla ephakeme yalawa maslipper abesilisa nabesifazane inkulu ngokuphindwe kabili kunama-slipper ajwayelekile, kanti ugqinsi oluwu-0.6-1.37 inch sole lugcina izinyawo zakho kude namanzi, uthuli noma udaka ngenkathi inikeza ukwesekwa okukhulu.
【Ayisheleli futhi Ingagudluki】: I-non-slip sole yakhelwe ngama-wavy bumps, esebenza kahle kakhulu ngokumelene nokushelela futhi ifaneleka ngokuphelele ukugqokwa kwasendlini yangasese.Izimbadada zokugeza zilula futhi zihlala isikhathi eside, zinikeza isipiliyoni sokugqoka esinethezekile kanye nokunciphisa ingcindezi yokuhamba.
【Izikhathi Ezisebenzayo】: Izilayidi ze-Cloud Slides zithwala kalula, isitayela esilula nomklamo oqinile ulungele zonke izikhathi zonyaka nezikhathi, igumbi lokulala elingaphakathi, igumbi lokugezela, igumbi lokuhlala, indawo yokubhukuda, ulwandle olungaphandle, iholide, i-spa, indawo yokuzilibazisa, ishawa yomphakathi, igumbi lomusi Linda.
Imibala ehlukene iyatholakala ongayikhetha, lesi sitayela sisesitokweni futhi singathunyelwa ngokushesha, uma unezidingo, sicela usithinte, sizokunikeza impendulo ngokushesha ngangokunokwenzeka, xhumana nathi ngqo noma i-imeyili:Amanda@jnpfootwear.com
Umcamelo Slippers Cloud Amaslayidi Abesifazane Abesilisa
Lawa maslayidi amafu enziwe ngezinto ze-EVA ezilungele isikhumba, ezinokukhanya kakhulu, eziphefumulayo, ezihlala isikhathi eside futhi ezivumelana nezimo, ezinikeza umuzwa wokugqoka izicathulo onethezekile futhi ophumuzayo.Ingagqokwa usuku lonke ngaphandle kokubangela ukukhathala ezinyaweni noma emaqakaleni.
Isikhathi sokuthumela: Apr-14-2022
© Copyright - 2010-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe., , , , , , ,
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona.